vidREACH: Sehatra an-dahatsary mailaka reimagining Prospecting | Martech Zone
Sabotsy, Martsa 28, 2020 Alahady, Martsa 29, 2020 Sean Gordon
Ny taranaka mitarika no tompon'andraikitra lehibe amin'ny ekipa marketing. Izy ireo dia mifantoka amin'ny fitadiavana, fampidirana ary famadihana ireo mpihaino kendrena ho lasa prospect mety ho lasa mpanjifa. Zava-dehibe amin'ny orinasa ny mamorona tetika marketing izay mampiorina ny taranaka mitarika.
Manoloana izany dia mitady fomba vaovao hisongadinana hatrany ireo matihanina amin'ny marketing, indrindra amin'ny tontolo mazàna matetika. Ny ankamaroan'ny mpivarotra B2B dia mihodina amin'ny mailaka, mijery azy io ho toy ny fantsona fizarana mahomby indrindra ho an'ny famokarana tinady. Noho ny lazany, ny mailaka dia mety ho tena sarotra ny mamaky sy manintona. Na izany aza, tsy azonao atao ny tsy miraharaha mailaka. Raha ny filazan'ny vondrona Radicati, misy kaonty mailaka mihoatra ny 6.69 miliara. Tetikasa Statista ny isan'ny mpampiasa mailaka mavitrika hahatratra 4.4 miliara amin'ny 2023.
Ny anjara asan'ny horonantsary
Mila fomba vaovao ny orinasa hanatrarana ny vinavina ivelan'ny fanentanana mailaka nentim-paharazana. Tsy manam-paharoa ny fanantenana tsirairay, noho izany ny fifandraisanao amin'izy ireo dia tokony hamboarina.
Ny horonan-tsary dia fomba fanao tsara ho an'ny ekipa mpivarotra sy marketing mba hampiavaka ny olona amin'ny fanentanana. Manjary singa lehibe amin'ny marketing. Mpividy B10 amin'ny fito amin'ny 2 BXNUMXB no mijery horonan-tsary mandritra ny fotoana fividianana. Tsy lazaina intsony, efa ho 80 isanjaton'ny aleon'ny mpanjifa mijery horonantsary toy izay mamaky momba ny vokatra iray.
Ny fanentanana ny varotrao dia afaka miavaka amin'ny alàlan'ny fandefasana horonantsary horonantsary namboarina izay mamaritra ny soso-kevitry ny soatoavina amin'ny fomba mamorona sy mahasarika. Ny fampiasana horonan-tsary dia manampy amin'ny fananganana fifampitokisana sy amin'ny fanabeazana ny vina aman-jery. Izy io dia mampiroborobo ny fifandraisan'ny tsirairay amin'ireo prospect raha mampitombo ny fahatsiarovanao ny marika.
vidREACH dia mailaka an-dahatsary sy sehatra fifanakalozana varotra ahafahan'ny mpanjifa mahatratra ny vinavina amin'ny alàlan'ny fampifangaroana hafatra an-tsary, mailaka ary SMS. Ny sehatra dia manolotra horonan-tsary sy mailaka natao ho azy sy mandeha ho azy ka ny fifanakalozana tsirairay dia manokana sy omena ny fanantenana tsirairay.
Misy singa efatra lehibe amin'ny sehatra vidREACH - horonan-tsary, fandefasana, fampidirana ary fanadihadiana.
Video - Ny video dia fomba iray hahatratrarana ny mpihaino anao amin'izay misy azy ireo. Amin'ny alàlan'ny sehatra vidREACH, azonao atao ny manoratra horonantsary momba anao, manoratra ny efijeryo, na mampiasa serivisy fitantanana mihitsy aza mba hananana horonantsary voarakitra ho anao. vidREACH dia mamela anao handefa horonan-tsary misy akony manokana.
Workflow - Ny workflow dia mamela ny ekipanao handefa ny hafatra mety amin'ny fotoana mety. Amin'ny alàlan'ity endri-javatra ity dia azonao atao ny manavaka sy manamboatra ny fitarika mitarika, ny fifanakalozana varotra, ny fifandraisana amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa ary ny fizotran'ny fampiofanana ho an'ny mpiasa. Ireo mpifandray aminao dia mihodina amin'ny alàlan'ny workflow voalahatra mifototra amin'ny fomba nifandraisan'izy ireo tamin'ny fanentanana nataonao. Miorina hatrany sy ara-potoana ny fanaraha-maso.
Integrations - Zava-dehibe ho an'ny horonantsaryo ny hahafahany miasa miaraka amin'ireo fitaovana sy sehatra hafa ampiasanao, indrindra ho an'ny fanentanana. vidREACH dia mirindra tsara amin'ny Outlook sy Gmail, ary koa amin'ireo sehatra malaza toa ny Salesforce, Facebook, Microsoft ary LinkedIn.
Analytics - Ny fahalalana ny fomba fampandehanana ny mailaka ataonao dia zava-dehibe. vidREACH dia mihoatra ny tsindry rohy ary manome famakafakana mandroso. Azonao atao ny mandrefy ny fampielezana horonantsary sy ny fahombiazan'ny workflow ary mijery ny tatitra namboarina amin'ny fotoana tena izy. Amin'ny alàlan'ireto analytics ireto dia azonao atao ny mamily ny fizotran'ny asa fivelomana sy ny fifanakalozana varotra mifototra amin'ny zavatra mandeha sy izay tsy mandeha.
Ireto misy fiasa lehibe sasantsasany izay manolotra ny ekipa varotra sy varotra vidREACH hanampy amin'ny fanamafisana ny fizotran'ny mailaka amin'ny horonan-tsary:
Email templates - Azonao atao ny mamorona modely mailaka misy marika miaraka amin'ny fandefasana hafatra efa nekena mialoha izay azon'ny soloanao alefa amin'ny vinavina amin'ny tsindrio bokotra iray.
Misintona sary - Avy amin'ny sehatra vidREACH, azonao atao ny manoratra ny efijeryo sy mandefa demos manokana ho an'ny vinavinanao.
Fampandrenesana tena misy - Ireo mpampiasa dia mahazo fampandrenesana amin'ny fotoana tena izy isaky ny misy olona mifampiraharaha amin'ny mailaka na video alefany. Izany dia manampy anao hiantoka ny fijanonanao eo ambonin'ny valiny ary tsy ho diso fanantenana ianao.
Teleprompter - Mety hanampy ny script iray rehefa manoratra horonantsary. vidREACH dia manolotra teleprompter ao anaty app mba tsy hilaozanao tsianjery ilay script na hitazomana anao fotsiny amin'izay tianao holazaina.
Ny matihanina amin'ny varotra sy ny varotra manerana ny indostria samihafa dia afaka manararaotra vidREACH. Tombontsoa manan-danja izay nahita fahombiazana dia ahitana ny fandraisam-bahiny, trano, varotra ary fialamboly. Ny fampiasana horonan-tsary dia afaka manatsara ny tahan'ny fisokafana sy tsindry.
mpampiasa vidREACH efa nahita a 232 isan-jato ny fiakaran'ny tahan'ny mailaka misokatra rehefa mampiasa horonan-tsary ho an'ny taranaka mitarika ary a Fisondrotana 93.7 isan-jato amin'ny fanendrena miaraka amin'ny vinavinan'ny vokatra mitarika avy any ivelany. Ny mpanjifa vidREACH dia namorona horonan-tsary 433,000, nandefa mailaka 215,000 ary nahita tahan'ny filalaovana video 82 isan-jato.
Raha te hisongadina ao anaty boaty ianao ary hahita mitsambikina amin'ny tsindry rohy mailaka sy fitarihana mahay, andramo ny mampiasa a sehatra mailaka horonantsary amin'ny fizotranao.
Momba ny vidREACH
vidREACH dia mailaka an-tsarimihetsika manokana sy sehatra fifanakalozana varotra izay manampy ny orinasa hirotsaka amin'ny mpihaino azy, hitondra fitarihana bebe kokoa ary hifampiraharaha bebe kokoa. Miaraka amina tanjona hanampiana ny ekipa rehetra hahatratra ny fahaizany feno, vidREACH dia manome paikady fitarihana mitarika ambaratonga feno ho an'ireo mpanjifa mitady hanitatra ny tratrany mihoatra ny fomba nentin-drazana.
Tags: fizahana-taratrafifampiraharahana amin'ny varotrafivarotana varotramailaka horonantsarysehatra mailaka horonantsaryvidreach
Sean Gordon dia manana firaketana an-tsoratra firaketana betsaka, fandraisana mpiasa, fanofanana ary famohana ny talentan'ny olona. Sean niorina vidREACH.io hamelombelona sy hanokana ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny herin'ny horonantsary. Namorona orinasa vaovao i Sean, namelombelona ny kolontsain'ny orinasa mijanona, ary nanoro mpiasa an-jatony izay nanao zavatra lehibe.
Appy Pie App Builder: Sehatra fananganana rindrambaiko tsy misy kaody ho an'ny mpampiasa